Mitemo & Maitiro -
Aya mazwi ebasa anosanganisira kodzero uye zvisungo pakati pako neAPlus Global Ecommerce.
Verenga chibvumirano nokungwarira usati wabvuma kubhadhara mari yemasevhisi edu. Kana iwe usingakwanise kunzwisisa chero chikamu kana uine chero mibvunzo saka inzwa wakasununguka kutibvunza isu rubatsiro. Tinokukurudzira kuti utore nguva yakawandisa sezvaunoda kuti unzwisise sevhisi inopihwa nesu.
"Chibvumirano”: Chibvumirano pakati pako nesu.
"sevhisi": Ndiyo mhando yebasa rakasarudzwa newe.
"iwe”: Mutengi kana iye akatenga masevhisi edu.
"Us","Our","We”: APlus Global Ecommerce
2.1. Iwe wakagadza US pane basa rakabvumiranwa uye Takabvumirana kupa iyo yakatarwa sevhisi maererano nemitemo & mamiriro.
2.2. Ukangotenga sevhisi, chibvumirano pakati pedu chinotanga.
3.1. Isu tichapa masevhisi edu zvichienderana neruzivo rwunopihwa newe, uye chero kutaurirana pakati pekambani yako yemutengesi neAmazon
3.2. Kubhadhara kwako kwebasa hakusi mhosva kune yakadzorerwa kudzoreredzwa.
4.1. Isu tichagadzirisa nyaya iyi nekukurumidza sezvazvinogona zvichienderana neruzivo rwunopihwa newe.
4.2. Isu tinopa rairo yekutarisana neAmazon. Ibasa rako kuvatevera sezvinobvira.
4.3. Masevhisi edu anozopihwa kwauri kusvikira nguva yedu yebasa yapera.
5.1. Isu hatipe chero mhando yezano repamutemo.
5.2. Hatina mhaka kune chero danho repamutemo rinotorerwa iwe chero chiitiko chekunyepedzera.
5.3. Hatibvunze chero vimbiso yekumiswa mune ramangwana kana nguva yedu yapera.
6.1. Isu tinovimba neruzivo rwunopihwa newe. Iwe unofanirwa kupa ruzivo rwese uye zvinyorwa zvekutanga (kana zvikabvunzwa) zvakanyanya kune ruzivo rwako. Chero nyaya inomuka kupfuura iyo info yakapihwa haina mhosva kwatiri.
6.2. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe unochengetedza zvine hungwaru kutaurirana nesu panguva yedu yetemu yebasa kuitira zvirinani kugona. Tinogona kutaura newe netsamba, runhare, fakisi, kana tsamba. Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti musatifuratira kana zvingatungamira kune isina basa sevhisi yatisingazopomerwe patinogara tichisvika.
6.3. Kugara nemitemo nemirau yeAmazon ibasa rako.
Maitiro Ekumisa Chibvumirano
7.1. Unogona kugara uchibvisa chibvumirano chako nesu. Kwatiri saka zvese zvaunoda kuti utitumire tsamba pa info@aplusglobalecommerce.com zvine chekuita nekudzima
Tingaite sei kumisa Chibvumirano
8.1. Chibvumirano chinogona kumiswa kubva kudivi redu mazuva gumi nemana ekucherechedzwa. Pazasi pane inotevera kesi apo isu tinosungirwa kumisa chibvumirano ichi.
8.2. Iwe watyora mazwi & Maitiro.
8.3. Ruzivo rwunopihwa newe runogona kunge rusirizvo kana rwekunyepera.
8.4. Pakave pasina tsamba kubva kudivi rako kwemwedzi mitanhatu (seyakazara).
9.1. Chibvumirano ichi Newe chinotongwa nemitemo yeIndia. Chero kupokana kuchibvumirano kunoitwa nechero dare muIndia.
Isu tinoda kupa masevhisi edu kune epamusoro mwero. Ichi ndicho chikonzero tinokoshesa mhinduro yako zvakanyanya.
Izvo zvakakosha kuti iwe utizivise kuti pese paunenge usina kugutsikana nebasa kuitira kuti isu tigadzirise uye nekuvandudza izvo zvatinofanira kupa.
Tichaedza kupindura nekukurumidza sezvinobvira kune chero mubvunzo kana nyaya uye titore zvinhu mumaoko edu kuti zviite sezviri muchibvumirano.
Maitiro edu ekutora Zvichemo
Ndokumbirawo uteedzere maitiro aya kubatsira kugadzirisa yako nyaya nekukurumidza sezvazvinogona.
Inodikanwa ruzivo rwechichemo.
Kuti uite chichemo ipa inotevera ruzivo rwabvunzwa pazasi.
Zita rako uye email kero
Tsananguro yakajeka yekunyunyuta kwako kana kunetseka
Rondedzero yekuti iwe ungade kuti isu tigadzirise mamiriro acho
Nzira yekuita chichemo kwatiri?
Tumira mashoko ako pamwe chete nekunyunyuta pa info@aplusglobalecommerce.com
​Kudzorerwa uye Kuregererwa
APlus Global Ecommerce haina kupihwa chero kudzoserwa mushure mekunge sevhisi yapihwa. Ndiro basa rako kuti unzwisise marongero ekudzorera panguva yekutenga.
Asi mune yakasarudzika mamiriro, isu tinogona kutora danho rinodiwa maererano nerudzi rwebasa ratinopa.
Tichakudza kudzoreredzwa mune inotevera mamiriro:
Kana iwe usingakwanise kuwana sevhisi yaunoda pamusoro pekusakwanisa kutumira meseji nekuda kwemupi wako email. Mune ino mamiriro, tinokurudzira kuti ubate ASAP kuti ubatsirwe. Izvo zvirevo zvichaendeswa kubazi revashandi vevatengi zvakanyorwa. Iko kunyorera kunofanirwa kupihwa mukati memazuva maviri ekuisa odha kana sevhisi ichaonekwa seyakagamuchirwa.
Kana iwe usingakwanise kuwana hunhu hunodiwa hwebasa sekubvumirana. Mune yakadaro nyaya iwe unosungirwa kubata Mutengi Webasa Dhipatimendi mukati memazuva maviri kubva musi wekutenga. Iwe unosungirwa kupa humbowo hwakajeka pamusoro pebasa rako rakatengwa uye tsananguro yaro. Kana kunyunyuta kwacho kuchiratidzika kunge kwekunyepa kana kwekunyepedzera saka hakuzovaraidzwa kana kukudzwa.
Unogona kunyorera kuti udzore mari kana watenga asi usati wagamuchira sevhisi yakatarwa. Unogona kutumira chikumbiro pamwe nechikonzero chekudzoserwa.
Isu tinogara tichishuvira kubatsira uye nekuita zvakanakisa mukana wega wega watinawo wekukubatsira iwe !!!
Rarama hurukuro: https://aplusglobalecommerce.com/
Ndokumbirawo umirire maawa masere kusvika gumi nemasere kuti vatengi vedu veTeam Service vadzokere kwauri padambudziko.